Sina mafana fivarotana olona 2 fiara an-tampon'ny fiara 4WD fiara ambony tranolay fananganana tranolay an-tampon'ny tranobe | Arcadia
Fivarotana mafana 2 olona 4WD Vehicle Roof ambony tranolay tranokala tranolay ambony tafo
Ny tranolay malefaka ambony tafo fiara, mba hahafahanao miala sasatra sy mankafy ny eny ivelany. Vita avy amin'ny lamba poly / landihazo avo lenta vita amin'ny laoniny, ny lasitrao sy ny rano ambony tampon-tranolay tampoka mifanaraka tsara amin'ny tampon'ilay 4 × 4 anao. Ny tohatra miakatra aluminium izay azo alaina azo averina mora foana. Ny kidoro dia miaraka amina kidoro mamirapiratra 65mm misy fonony azo esorina.
Miaraka amin'ny varavarankely sy varavarana voasarona tanteraka. tsy misy vovoka sy mahatohitra bibikely.
Ny tranolay malefaka ambony tafo fiara, mba hahafahanao miala sasatra sy mankafy ny eny ivelany. Vita avy amin'ny lamba poly / landihazo avo lenta vita amin'ny laoniny, ny lasitrao sy ny rano ambony tampon-tranolay tampoka mifanaraka tsara amin'ny tampon-tranonao 4x4. Ny tohatra miakatra aluminium izay azo alaina azo averina mora foana. Ny kidoro dia miaraka amina kidoro mamirapiratra 65mm misy fonony azo esorina. Miaraka amin'ny varavarankely sy varavarana voasarona tanteraka. tsy misy vovoka sy mahatohitra bibikely.
miaraka amin'ny ekipa teknolojia 5 olona, ​​tongasoa OEM! Alefaso aminay ny volavola sy ny antsipiriany tadiavinao, avy eo hanao izay tratranay izahay mba hanomezana vidiny tsara indrindra.
Trano tampon-tampon-trano miaraka amina kofehy amin'ny sisiny, tranolay fandroana amin'ny lafiny fiara, izy rehetra dia azo ampifandraisina amin'ny filan'ny mpanjifa.
Ankafizo ny volavolainay mandroso sy manatsara hatrany ny vokatra. Manolo-tena ho anao izahay ary manome antoka fa mahazo serivisy tsara indrindra, vokatra tsara indrindra ary antoka azo antoka amin'ny fividiananao.
Teo aloha: Tsara kalitao tsara indrindra China 4WD Roof Tent Hard Shell Car kamiao 2.3m Roof tampon-tranolay Aluminium Telescopic Dingana tohatra ho an'ny fitobiana sy fitsangatsanganana
Manaraka: 3M 4M 5M 6M 7M New endrika ivelany lakolosy lakile lakolosy tranolay varavarana lamba canvas lakolosy amidy